Ahoana no hampihenana lanja haingana kokoa - Victor Mochere
Alarobia, Jona 29, 2022
Ny fihenan'ny lanjany dia iray amin'ireo toe-javatra sarotra atrehin'ny olona maro. Na izany aza, izay mamaritra raha hahatratra ny vokatra irina ianao dia ny paikady ampiasainao. Maro ny antony mety te hihena haingana, anisan'izany (fa tsy voafetra amin'ny): fandidiana ho avy, toro-hevitra avy amin'ny dokotera, na ho an'ny hetsika na fialan-tsasatra ho avy. Na izany aza, matetika ny fihenan'ny lanjany dia miadana, ary mety hahakivy izany. Soa ihany fa misy fomba ara-pahasalamana maro hanampy anao hanatsara ny fatiantoka tsy misy fianjerana na fanaovana sorona ny fahasalamanao.
Ireto ny fomba hampihenana lanja haingana kokoa.
1. Diniho izay hohaninao
2. Ovay ny fahazaranao misakafo
3. Mihinàna paoma alohan'ny sakafo
4. Miantsena amin'ny Internet ny sakafonao
5. Mihinana atody ny maraina
6. Misotroa ronono aorian'ny fanazaran-tena
7. Manatsara ny metabolism
8. Mihinana vokatra vita amin'ny ronono ambany kaloria
9. Ampio betiravy amin'ny sakafonao
Ny fampihenana ny lanja dia momba izay hohaninao fa tsy izay mihinana anao. Mihinàna sakafo sy tsakitsaky foana izay mitaky ezaka kely amin'ny fihinanana satria mampihena ny fihinanana mandeha ho azy. Ny sakafo tokony hotapahina alohan'ny hisakafoana dia manampy amin'ny kaloria be dia be hohanina ka manampy anao hampihenana lanja.
Araka ny fikarohana, ny olona mihinana sakafo maraina tsy tapaka dia mirona mihinana sakafo be dia be amin'ny sakafo manaraka. Izany dia midika hoe mitombo lanja. Miezaha mafy ary esory ny fahazarana misakafo maraina tsy tapaka. Mety ho asa sarotra izany saingy amin'ny farany dia hanampy anao amin'ny fihinanana sakafo kely kokoa amin'ny sakafo manaraka ary izany ho setrin'izany dia hanampy anao hampihena lanja.
Araka ny fikarohana, ny paoma iray dia mamokatra hormonina antsoina hoe GLP-1 izay manimba ny fampandrenesana hanoanana alefa any amin'ny atidoha. Noho izany, raha mihinana paoma alohan'ny sakafo ianao, dia mampihena ny isan-jaton'ny kaloria mety ho laninao amin'ny sakafo. Arakaraky ny vitsy ny kaloria laninao, ny lanja very.
Na aiza na aiza misy anao dia tsara ny miantsena sakafo amin'ny fivarotana an-tserasera. Ny fiantsenana sakafo an-tserasera dia mametra anao hifikitra amin'ny sakafo misy ihany fa tsy sakafo hafa. Ny fividianana sakafo amin'ny lisitra efa voafaritra dia manampy anao hampihena lanja satria ny sakafo voatanisa ihany no hovidina. Noho izany, mendrika ny mividy sakafo amin'ny fivarotana an-tserasera.
Te hihena ve ianao? Avy eo dia tokony hanandrana mihinana atody ianao amin'ny maraina satria araka ny fikarohana dia mihena 60% bebe kokoa noho ireo tsy mihinana atody ny olona mihinana atody maraina.
Misotroa ronono foana aorian'ny fanazaran-tena satria ny ronono lany aorian'ny fanazaran-tena dia mampihena ny kaloria lany satria ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny fanamboarana hozatra fa tsy miangona ao amin'ny vatana.
Ny metabolisma dia manampy amin'ny fihinanana tavy fanampiny ao amin'ny vatanao. Mihinàna sakafo sy zava-pisotro izay mampisondrotra ny metabolism izay ho setrin'izany dia mitarika amin'ny fihenan'ny lanja. Miezaha mihinana sakafo izay manitatra ny lalan-drà sy manatsara ny metabolism.
Ny fihinanana vokatra vita amin'ny ronono ambany kalôria toy ny yaourt grika sy ny fisorohana ireo feno siramamy dia fomba azo antoka hampihenana ny lanjany. Ny sakafo sy zava-pisotro be kaloria dia tokony hialana amin'ny vidiny rehetra.
Ny Beetroot dia anti-oxidant izay manampy amin'ny fampihenana ny tavy hohanina mandritra ny sakafo. Raha mihinana sakafo toy ny burger be matavy ianao, dia ampio betiravy amin'ny sakafonao.
Tsara be hoy:
Aprily 29, 2022 amin'ny 6: 28 am
Misaotra betsaka tamin'ny fampianaranao fa ny fanontaniako dia hoe: Ahoana no mety hahavery lanja ny beetroot